China Model No: NY Series hydraulic hot spinning ukuvala ifektri kanye nabaphakeli | Hlanganisa phezulu
Imodeli No: NY Series hydraulic hot ukuphotha umshini wokuvala
Umsebenzi：Umshini wokuvala oshisayo we-NY Series we-hydraulic oshisayo ofaneleka ikakhulukazi abakhiqizi bezicishamlilo ze-carbon dioxide noma amabhodlela e-oxygen.
I-NY Series hydraulic cylinders hot spinning machine ine-NY-180, NY-219, NY299 imininingwane emithathu. Umshini wokuvala wokuphotha oshisayo we-NY ungavala ukusebenza kwamabhodlela e-oxygen ayi-liquid, ipayipi le-boiler header, ishubhu nokunye okucutshungulwe ku-accumulator bottleneck flat. Ifaneleka ikakhulukazi umkhiqizi wesicisha-mlilo. Nge-hydraulic clamping, i-hydraulic turning, umklamo oyingqayizivele, ubuchwepheshe obuhamba phambili.
Umshini wokuphotha oshisayo we-NY Series hydraulic hydraulic cylinders unamamodeli wokusebenza wemanuwali kanye ne-semi-automatic.
I-NY Series i-hydraulic hot spinning evala umshini wokuvala wepayipi lensimbi iyimpahla yepayipi engenamthungo enobubanzi obuthile nobude, ebekwe emgqonyeni omkhulu we-shaft. Ngokucindezela i-hydraulic cylinder, ngokucindezela, bese iphenduka ngokushesha, ikhanda lishiselwa ekushiseni kwe-thermoplastic, bese i-swing cylinder piston isetshenziswa ukuze iphushele i-rack phambili, ishayela ukujikeleza kwegiya, ngenxa yokujikeleza kwe-shaft yegiya, ukuze ukuvala kufa ku-extrusion ye-thermoplastic steel tube ibe yisimo esithile sobuso.
Ukusebenza kahle kokukhiqizwa komshini wokuvala oshisayo we-NY Series hydraulic hot spinning kuphezulu kakhulu, kulungele ukukhiqizwa ngobuningi bemikhumbi yokucindezela, njengamasilinda amancane naphakathi nendawo, zonke izinhlobo zemikhumbi yokucindezela, amabhokisi okuqoqa ubhayela, njll.Izisilinda ezishisayo ze-NY Series umshini ubuchwepheshe obusha obuthuthukiswe eminyakeni yamuva. I-NY Series hydraulic hot spinning cloning machine ingagcina insimbi eningi namandla, iwukuqaliswa kwakamuva kwasekhaya kobuchwepheshe.
Isimiso sokusebenza somshini wokuvala we-NY Series hydraulic hot spinning
Ngokucindezela i-hydraulic cylinder, ngokucindezela, bese iphenduka ngokushesha, ikhanda lishiselwa ekushiseni kwe-thermoplastic, bese i-swing cylinder piston isetshenziswa ukuze iphushele i-rack phambili, ishayela ukujikeleza kwegiya, ngenxa yokujikeleza kwe-shaft yegiya, ukuze ukuvala kufa ku-extrusion ye-thermoplastic steel tube ibe yisimo esithile sobuso. Ukusebenza kahle kokukhiqizwa komshini wokuvala oshisayo we-NY Series hydraulic hot spinning kuphezulu kakhulu, futhi kufanelekile kumabhizinisi akhiqiza ukuvala imikhumbi yokucindezela, amabhokisi okuhlanganisa amabhayela nezinye izingxenye ngobuningi.
Imodeli Isivinini se-eksisi eyinhloko(r/min) I-Clamping cylinder.KN） Isilinda sokuvala nokugaya(KN) Amandla(KW)
I-NY-180 350-400 110 60 22
I-NY-219 350 180 60 37
I-NY-299 320 415 76 74
Umshini wethu wokuphotha oshisayo we-NY Series hydraulic cylinders uhlinzeka ngezingxenye zomshini womkhiqizo odumile, besisebenzisana nabaphakeli abaningi abadumile emhlabeni wonke, njenge-SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI njalonjalo iminyaka engaphezu kwe-10.
Ubuncane bemodeli ye-NY Series hydraulic hot spinning rolling machine ingavikelwa kahle esitsheni esisodwa esingu-40 HQ. Uma sihamba ngesikebhe, sizovala i-poncho kanye nedekhi ye-Load ukuze sivikele umshini wethu wokuvala oshisayo we-NY Series hydraulic hot spinning.
Buka umshini wokuvala oshisayo we-NY Series hydraulic osebenza!
Okwedlule: I-Waste Paper Baler - Inombolo Yemodeli: Isilawuli Esizenzakalelayo SakwaShayina I-Y81 Series Hydraulic Scrap Metal Press Aluminium Baler Machine Wokugaywa kabusha kwe-Metal Press – Unite Top
Olandelayo: Inombolo Yemodeli: Isilawuli Esizenzakalelayo SaseShayina I-YDJ Series Hydraulic Scrap Metal Shear Machine Baler
umshini wokuvala oshisayo wokuphotha
Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya, I-Pop-Top Can Baler Equipment, I-Y81 Hydraulic Baler, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler, I-Scrap Metal Compactor,